Guqula isicatshulwa sibe ziigophe ukuthintela iimpazamo zokuprinta | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UPablo Gondar | | Idizayini yeMifanekiso, Umzekeliso, Tutorials
Dlulisa isicatshulwa ukuya kumagophe thintela iimpazamo kubalulekile xa uhambisa naluphi na uhlobo lweprojekthi ukuprinta. Ukuba sifuna iprojekthi yethu ihambe kakuhle, naluphi na uhlobo lweengxaki xa kuziwa kushicilelo, kufuneka siqiniseke ukuba zonke iitekisi zethu zigobile ngaphambili.
Xa uthatha iprojekthi yegraphic ukuyiprinta, kufuneka ube noluhlu lwee izinto zobugcisa ikhoyo ukuba sifuna ukuthintela iintloko zangomso kwaye sifezekise Iziphumo ezilungileyo.
Xa sithatha iprojekthi yemizobo kumatshini wokushicilela, kuqhelekile ukuba nohlobo oluthile lwe Impazamo elula ukuyiphepha, nokuba kukungafani kwemibala, umfanekiso oshukumayo, okanye ngokulula Impazamo yokuchwetheza. Singaziphepha iimpazamo ezininzi kwaye dlulisa isicatshulwa kumagophe ngaphambi kokuthumela ifayile ukuba iprintwe, inokuba yenye yazo.
Isicatshulwa sesika- typography umisele ifonti esinokuthi siyibonise ngokuchanekileyo kwikhompyuter yethu kodwa xa uhambisa ifayile kwenye iPC iyasilela kuthi kuba asifakwanga. Kuya kufuneka sazi ukuba uhlobo lochwethezo iyaboniswa ukuba ikhompyuter iyifakile Ngesi sizathu kufuneka sidlulise isicatshulwa kwii-curves, ukuba umatshini wokushicilela awunazo iifonti baya kutshintshelwa kwabanye xa kuprintwa ifayile.
1 Kutheni uguqula ubuchwephesha bube ngamagophe?
2 Guqula isicatshulwa sibe ngamagophe ngomboniso
3 Izinto ekufuneka uzigcine engqondweni xa uguqula isicatshulwa ukuya kumagophe
Kutheni uguqula ubuchwephesha bube ngamagophe?
Siyakuphepha iimpazamo zokuchwetheza
Sithatha ikamva intloko ebuhlungu
Guqula isicatshulwa sibe ngamagophe ngomboniso
Gqitha a isicatshulwa kumagophe yinto elula kakhulu kwaye ekhawulezayo, inenye konqakrazo Siyakwazi ukudlulisa isicatshulwa sethu kwii-curves ngaloo ndlela siphepha nayiphi na impazamo yokuchwetheza xa kufikwa phrinta isicatshulwa.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile khetha isicatshulwa sethu ngokucofa kuyo.
Xa sinombhalo okhethiweyo, cofa kuwoitekisi yokubhaliweyo yemenyu ephezulu kwaye sijonga ukhetho lwe yenza ulwandlalo. Ukuba yonke into ihambe kakuhle, isicatshulwa sethu sele sigobile kwaye singaprintwa ngaphandle kwengxaki.
Izinto ekufuneka uzigcine engqondweni xa uguqula isicatshulwa ukuya kumagophe
Isicatshulwa sethu ayinakuphinda iguqulwe Kungoko ke kufuneka siqiniseke ukuba asizukuphinda senze ezinye iinguqulelo kwiitekisi. Eyona iqhelekileyo necetyiswayo yile gcina isicatshulwa kwenye ifayile ngaphandle kokuhamba ngeenxa zonke xa sifuna naluphi na utshintsho ngomzuzu wokugqibela.
Asisakwazi ukubhala isicatshulwa (Iliso)
Ngelinye konqakrazo sifumana thintela typo eqhelekileyo ukuba iprojekthi ebonakalayo inokusijika gwenxa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Guqula isicatshulwa sibe ziigophe ukuthintela iimpazamo zokuprinta
UEugenio Gil sitsho
Kwiinkqubo zoyilo bekusoloko kukho (kwaye kukho) imenyu esezantsi ekuvumela ukuba ubeke imifanekiso kunye namagama asetyenzisiweyo kuxwebhu oluthunyelwe ukuba luveliswe. Akunyanzelekanga, ke, ukubaguqula ibe ziivenkile. Nokuba uxwebhu luthunyelwe ngokufanelekileyo luguqulelwa kwiPDF, kuba zombini imifanekiso kunye neefonti zingene kuyo. Konke oku, ewe, ukuba sithetha ngeengcali.
Phendula u-Eugenio Gil